Top 5 Ọnọdụ With The Best Nightlife Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Ọnọdụ With The Best Nightlife Na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 28/03/2021)
ejegharị ịhụ nlegharị anya bụ a oké oke - ma ihe ma ọ bụrụ na ị na-achọ nwere fun? Na ikpe, e nwere obodo na nke kacha mma nightlife, ma na-e jiri ụgbọ okporo ígwè dị mfe na ọnụ.
Maka party anụmanụ, ọ dịghị ihe dị nnọọ ka enwe na nightlife nke a ọhụrụ obodo. Ihe kacha mma banyere na-eme ya na Europe bụ na obodo ọ bụla nwere a dị iche iche vibe. Were a lee anya na n'elu 5 obodo na nke kacha mma nightlife na-ahụ nke onye ị na-enwe ndị kasị:
1. Berlin si Nightlife, Germany
’Ll ga-ahụ Berlin na Top 5 Ọnọdụ na nke kacha mma nightlife maka a mere. The obodo nwere a vibrant ufiop clubbing idaha na-enweghi oyiri na Europe. Berlin na-adọta ọtụtụ ndị nwere ụdị echiche a otu oriri. Ọ bụ ya mere na ọ fọrọ nke nta a nkwa-enwe ezi oge na otu onye nke ọtụtụ klọb. Berghain bụ n'ezie ndị obodo a ma ama n’abalị, nakwa nke kacha dịpụrụ adịpụ na ụfọdụ, ga-ekwu ihe kacha mma na Europe. Ozugbo a ike osisi, ugbu a ọ bụ ebe oria a kachaa nke Berlin si clubbing idaha. Ị gaghị agbaghara eleta ya ma ọ bụrụ na ị na-achọ a oké oge! Ọ dabara nke ọma, eru Berlin ụgbọ okporo ígwè dị mfe - ị nwere ike nweta e si Amsterdam, London, na Frankfurt, n'etiti obodo ndị ọzọ.
2. Amsterdam nke Nightlife, na Netherlands
Amsterdam bụ otu n'ime obodo ndị ahụ kwesịrị ya aha dị ka onye nke kasị mma hey. Ọ bụ a na-ewu ewu ebe, karịsịa maka ndị hụrụ ọhụụ, Tekno, hip iwuli elu, miri ụlọ, na EDM. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mkpa ebe ileta bụ nkwakọba Elementenstraat na Sugar Factory. Ma dị ukwuu klọb hey na, dabere na ihe na-amasị gị. Otu ihe bụ n'ihi na n'aka - ndị ọzọ na-anụ. The klọb na-adịghị na-emechi ruo mgbe 3 ma ọ bụ 4 ụtụtụ, otú e nwere ọtụtụ oge na-enwe. Iru Amsterdam ụgbọ okporo ígwè si ọ bụla isi European obodo ndị dị ka Berlin, Paris, London, na Brussels.
Na oyi na-atụ Scandinavia, ma ndị obodo ahụ na njem nleta maara otú hey. Stockholm bụ n'etiti obodo na nke kacha mma nightlife esighịkwa dịgasị iche iche nke klọb na oké ìgwè mmadụ na ha. Hell na Kitchen bụ ebe i nwere ike na-atụ uche na Stockholm, wee jide n'aka na-elele ya. Nke a obodo na-adị mfe ruru ụgbọ okporo ígwè site na ndị ọzọ European okporo ígwè n'ógbè nlekọta ọrụ.
Rome pụrụ iche akụkọ ihe mere eme ikuku enhances àgwà nke clubbing n'obodo. Quintessentially Italian, ahụmahụ nke clubbing na Rome nwere a ụfọdụ na-ahụ n'anya, ukporo bụkwaara ya. Big egwu ala, enyi na enyi bartenders, na a fun ikuku ka Rom nightlife a ahụmahụ pụrụ iche. Otu n'ime akụkụ kachasị mma banyere ịga Italytali bụ na e nwere ọtụtụ ụgbọ okporo ígwè agafe. Ha nwere ike inwe ị na n'ebe ọ bụla ị chọrọ ịga. Offọdụ n'ime ha ga-emeso gị ọmarịcha nlegharị anya n'ụzọ.
London nwere a dị iche iche clubbing idaha na-ewepụta na ya n'etiti n'elu obodo ise na nke kacha mma nightlife na Europe. Ị nwere ike ịga adọrọ adọrọ nightclubs, burlesque egosi, ochie klọb, na ihe ọ bụla dị n'etiti. Ọ bụ oké ebe na party, na na-na London site ụgbọ okporo ígwè bụ inweta ọtụtụ isi European obodo. Ị gaghị agbaghara ndị London clubbing ahụmahụ!
Njikere maka gị ọzọ party-achọ njem? anyị Top 5 Ọnọdụ na Best Nightlife na Europe agaghị tụkwasịrị, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eleta ha tupu. Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè na-enwe fun na music!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-cities-best-nightlife%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / fr na / de ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#klọb London nightlife Party ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelamsterdam ejegharị travelgermany nje ndi njem
Best Hiking Start Points Na Europe
Train Travel Austria, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe